Induction Brazing HAVC Pipe miaraka amin'ny heater matevina matetika
Home / Applications / Induction Brazing / Fantsom-panafody HAVC
Sokajy: Induction Brazing, induction brazing machine Tags: Brazing, mamono HVAC, mampitohy fantsona HVAC, varahina varahina, varahina HVAC brazing, fantsona varahina miteraka, HVAC, Heater fanafanana brazac, Indostria HVAC, Fantsom-pifandraisana HVAC miolakolaka, fampidirana hvac brazing, Heater brazing fampiroboroboana HVAC, Heater HVAC fampidirana
Fantsom-pifandraisana HVAC miolakolaka
Ny fantsom-pampangatsiahana dia miteraka brazed foana satria ny brazing dia manao firaisana tsy misy famoahana mivaingana izay mahazaka mari-pana sy faneriterena avo sy ambany. Rehefa fantsom-pampangatsiahana mangatsiaka dia tsara ny mampiasa solder izay misy volafotsy ao anatiny satria ny volafotsy mifamatotra amin'ny varahina ary mahatonga fiarahana mivaingana mahery (capillary manintona).
HLQ fampidirana dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana vahaolana fanamoriana fampidirana manokana ho an'ny famonoana ny faritra compressor, ireo singa fanafanana ary ireo mpaninjara hafanana.
Ny fantson-drivotra dia manana faritra maro izay efa maty. Ny fitaovana mahazatra indrindra dia ny varahina sy aliminioma:
Ny ampahany aluminium, ohatra ny fifandraisana evaporator sy condenser (tube-to-Tube, Tube-to-block, Tube-to-tank)
Tube-to-fittings amin'ny singa condenser
Tube-to-fittings amin'ny singa evaporator
Tube-to-fittings amin'ny compressor
Tube-to-valves amin'ny rafitra fizarana
Induction Brazing dia mitovy amin'ny soldering afa-tsy ny mari-pana dia mihoatra ny 800 degreF.
Ho an'ny varahina, ny fitambarana brazing izay be mpampiasa indrindra dia antsoina matetika hoe sil-phos araka ny fahitana eo ankavia.
Misy karazany maromaro io fitambarana io.
15% Phosforus / Copper / Silver Alloy dia karazana iray izay mampiasa volafotsy 15% ary fenitra ho an'ireo techs service manao fanamboarana ireo fitaovana fampangatsiahana vata fampangatsiahana. . Tsy mandeha araka ny tokony ho 5%.
Misy koa ny Phosphore / Copper Alloy tsy misy volafotsy hitako fa tena tsy ilaina amin'ny fanamboarana.
Coping Brazing ho an'ny indostrian'ny HVAC
Volafotsy marobe fantsom-by vita amin'ny volafotsy narovan'ny tompon'ny MSI Automation teknolojia fampiroboroboana fampidiranaNy fanamafisana induction miaraka amin'ny teknolojia coil fampidirana fampidirana sahaza dia afaka mandresy volafotsy maro fantsona varahina vita amin'ny tifitra iray. Io fomba fanao io dia manafoana ny famonoana ny fanilo amin'ny tanana, manatsara ny tsy fitoviana ary mampihena ny fahafahan'ny fifandraisana mitete.
Ny brazed iraisana eo anelanelan'ny fantsom-by sy ny varahina dia vita tanteraka. Fotoana fanamafisana amin'ny fampiasana ny MSI's special Indonezianina fanalefahana dia 1/4 an'ny famolavolana volo boribory varahina mahazatra.